Muxuu mustaqbalka 6G iyo wixii ka sareeya u egyahay nidaamyada isgaarsiinta illaa 5G? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Muxuu mustaqbalka 6G iyo wixii ka sareeya u ekaan doonaa nidaamyada isgaarsiinta illaa 5G?
Waqtiga: 2020-04-17 Hits: 27
Laga bilaabo 1G ilaa 5G, waxay ka dhigan tahay jiilka koowaad ilaa hanaanka isgaarsiinta jiilka shanaad, laakiin 5G waa kacaan iyo casriyeyn tikniyoolajiyadeed oo wax ku ool ah. Tusaale ahaan, awoodda 5G waa 20 jeer oo 4G ah iyo 10,000 jeer oo ah 2G; isticmaalka tamarta halkii bit ayaa la yareeyay 10 jeer marka loo eego 4G; mugga waxaa loo yareeyay 1/3. Saldhigga 5G wuxuu u weyn yahay sida shandad oo keliya, 20 kilo oo keliya, Looma baahna in la dhiso qalcad birta weyn. Waxaa lagu dhejin karaa ulaha oo lagu dhejin karaa darbiga markii la doono; Dabcan, waxaa lagu rakibi karaa saqafka birta weyn ee jira, iyo xitaa 5G waxaa lagu dhejin karaa bullaacadda bullaacadda. Si kooban loo soo koobo, 5G wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
Bandwidth weyn: Awoodda 5G bandwidth waa mid aad u ballaaran oo bixin kara waxyaabo badan oo muuqaal sare leh. Kharashka waxaa lagu dhimi karaa qodob 100 ah, si dadka caadiga ah ay u awoodaan inay awoodaan telefishanka qeexitaan sare leh, dhaqankuna dhaqso ayuu u fiicnaanayaa.
Joojinta hoose: 5G, dhibaatada dib udhaca shabakada ayaa asal ahaan la xaliyaa.
Internetka Waxkasta: 5G waa kasban kartaa Internetka Waxkasta marwalba iyo meelkastaba, waana isku xirnaan iskuxiran iyadoon dib loo dhigin, si loo xaqiijiyo iskuxirka waxyaabaha iyo waxyaalaha, waxyaabaha iyo dadka iyo shabakada, si loo aqoonsado loona xakameeyo.
Dib-u-dhiska amniga: 5G waxay dhisi doontaa nidaam nabadgelyo oo cusub, waxaana la dejiyay nidaamyo gaadiid oo caqli gal ah sida dhulka, badda iyo hawada, kuwaas oo si wax ku ool ah u yareyn kara suuragalnimada shilalka taraafikada.
Haddii ay jiraan 5G, waxaa jiri doona 6G. Muxuu noqon doonaa mustaqbalka 6G ama wixii ka sareeya?
Waqtiga xaadirka ah, jawaab rasmi ah oo dheeri ah ayaa ah in 6G ay sahamin doonto ayna soo ururin doonto teknolojiyad laxiriirta 5G oo seegay.
Marka laga eego aragtida fudud ee la fahmi karo:Xawaaraha soo dejinta fikirka ee 6G wuxuu gaari karaa 1000GB daqiiqaddii, taasoo 100 jeer ka badan 5G
Hore: 4x4 Keypad Iftiimay Dijital Ah Oo Lagu Dhejiyay "Buugga Qaado" Mashiinnada Iibinta
Xiga: Farshaxanka gacanta midabka leh ee PTT iyo Fureyaasha furaha kontaroolada laga bilaabo SINIWO